I-Crossbost Harris Tweed
I-Scottish Travel Society
I-Western Isles Designs
I-Harris Tweed Shawl
Sonke isiteji sakhiwe ngesandla kusuka ekufeni kuya ukuphotha, ukusonta ukuya ekwalukeni okuqinisekisa ikhwalithi ephezulu kakhulu
Iboshwe ngenkinobho yesitatimende yokugqoka izinketho eziningi ukuze uthole i-drape enhle kakhulu
I-Iconic Harris Tweed
100% uboya okudaywe futhi kwaphothwa ku-Outer Hebrides kwase kwelukwa ngesandla ku-loom yami ye-hattersley eneminyaka engu-80 ubudala
Isibambo esithambile kanye nedrape ethambile ilungele ama-BBQ's ehlobo, uhambo lwasekwindla kanye nobusuku basebusika obuthokomele emlilweni
Hlala ufudumele kulobu busika
(noma ngazo zonke izikhathi zonyaka kuma-Hebrides!)
Isikhafu... esinesigqoko! Akusekho okusalungiswa phakathi kwesigqoko nesikhafu, izindlebe ezibandayo azisekho, ezifakwe uboya mbumbulu noma ukotini futhi ziboshelwe inkinobho yesitatimende ukuze zithokomale!
Izikhafu zendabuko, ezifakwe ukotini noma i-satin ukuze kube nokuzwakala okuthambile, futhi, njengazo zonke imiklamo yami, akukho okubili okufanayo. ngomkhiqizo oyingqayizivele ngempela
Insiza esesitayeleni efanelekile uma kubanda kwayo kodwa awufuni isikhafu esikhulu: ngaphakathi, ngaphandle, izikhathi ezikhethekile, umsebenzi... izinto ezihlukahlukene futhi ukhululekile!
Ibanzi kodwa incane kakhulu kunesikhafu esivamile, isesitayeleni kakhudlwana futhi ilungele isimo sezulu sasendle njengoba iluphu yokuzibopha isho ukuthi ayikwazi ukuphephuka!
Izikhwama Eziyingqayizivele Nezingubo
Isikhwama ngasinye se-Harris Tweed senziwa ngasodwa njengomkhiqizo oyingqayizivele kungekho okubili okuke kufane. Ilungele zonke izinsuku noma izikhathi ezikhethekile!
Amajazi ahlukile namajazi akhiwe kusukela ku-Harris tweed anemigqa emihle nezinkinobho zesitatimende. Ukwengeza okuphelele kunoma iyiphi i-wardrobe!
Enziwe ngesandla ngokucaciswa kwakho noma ngomklamo oyingqayizivele lawa ma-waistcoat alungele imishado, imicimbi ekhethekile, ubusuku bokuphuma noma ukugqama ku umsebenzi!
Izingubo, iziketi, izingubo zamantombazane amancane, ama-tunics nokunye. Ngayinye yaklanywa ngothando ngezandla kungekho nababili abake bafane!
letha ucezu oluncane lwe-Isle of Lewis ekhaya lakho...
Ngayinye yenze ukuba ihluke ngokuphelele noma ibe yipheya eyodwa ukuze uqiniseke ukuthi nguwe wedwa onalowo mklamo ohlanganisa usofa, umbhede, isihlalo noma ibhentshi lakho!
Iklanywe kusuka ku-Harris tweed, ukukhetha okuhle kugcinwa esitokweni kodwa ungakwazi uku-oda ngokukhetha kwakho i-tweed enobubanzi obungu-4 ongakhetha kuzo!
Ukuthintwa kokuqeda kunoma yiliphi igumbi ukukhanya, yenza okukhethekile kwakho kube ngalezi zibani zamabhodlela kanye ne-Harris tweed shades. Ezinye zize zipendwe ngazo izilwane zasendle kanye nezindawo!
I-Textile Wall Art
Amafindo angu-696 aboshwe kanzima ngesandla ukuze ahlanganise i-tweed endala kwentsha, alahlwe ngemva kwe-tweed ngayinye, manje asephenduke izilenge ezihlukile zodonga - isiqephu sokuqala, sesitatimende sekhaya lakho!
I-Sea Shore Jewellery
Gqoka ucezu lwe-Outer Hebrides ngale migexo ye-Lewisian Gneiss namacici. Yakhiwe kusukela etsheni elipholishiwe lasolwandle elineminyaka eyizigidi eziyizinkulungwane ezingu-7; ezingaphelelwa isikhathi, ezibambekayo, ukuzigcina ziyigugu!
Izandla eziqoqwe emabhishi e-Isle of Lewis le migexo yegobolondo, amacici, ama-brooches nezingcezu zezinwele kuwukuqeda ngokuphelele kunoma iyiphi ingubo!
Ucezu lomlando olugqokwe futhi lwalolongwa ulwandle, oluphucuziwe futhi lwapheleliswa ngokwemvelo. Okuluhlaza, blues, whites kanye ama-turquoise; izingcezwana zolwandle ezenziwe zaqina!
Ihlukaniswe ngokuphelele, ipuleti, isitsha, inkomishi - kwazi bani! Kodwa ipholishwe ulwandle, futhi yafakwa ebucwebeni ucezu olulodwa luhle kakhulu ngaphandle kwalo isimo sayo sokuqala!
Kufakwe ozimele bokhuni lawa ma-watercolor amancane asekuqaleni alungele ukuletha ukuthinta kwe-Hebrides ekhaya lakho
Ama-watercolor amakhudlwana agxunyekiwe alungele ukwenziwa uzimele. Ngasinye isifundo sokuqala esiyingqayizivele sezilwane zasendle kanye nezindawo ze-Outer Hebrides
Ipendwe kabuhlungu kumahansi alahliwe ngokwemvelo, idada nenyoni yezimpaphe ezidla inyama le misebenzi yobuciko yasekuqaleni izenzela izipho eziphelele noma izibiliboco!
Ama-Baubles apendwe ngesandla
Yebo lezi ziphelele ngoKhisimusi isihlahla kodwa futhi ziyathandeka ukuba ilenga unyaka wonke! Ukuthinta kancane kwe-Hebrides ekhaya lakho